Xa uthenga i-Domain kwiGoDaddy? Ngaba ungumnikazi wayo - Complete Guide
Xa uthenga i-Domain kwiGoDaddy? Ngaba ungumnikazi wayo
Nokuba uthenge igama lesizinda kwiGoDaddy okanye kwabanye ababoneleli ngeenkonzo, awunakho ukuba ngumnini ngokusisigxina. Ezobuchwephesha akukho mntu unokufanelekela oko. Kuya kufuneka ubhatale ukugcina i-domain yakho emva kwexesha elithile.
Ungagcina igama ledomain ubuninzi be 10 iminyaka, emva koko kuya kufuneka uyihlaziye. Ukwenza icace ngakumbi, ukuthenga i-domain kuyalingana kunye nokuthatha nokuhlawula irente yesakhiwo. Awunakho ukuba nesakhiwo kodwa kufuneka uhlawule iindleko zenyanga nokusisebenzisa.
Enye into kukuba uninzi lwabasebenzisi bathenga igama ledomain ubuncinci be- 2 iminyaka ukuya kuthi ga kwi 5 iminyaka. Emveni kwalonto, baya kolunye uhlaziyo. Ndihlala ndihlaziya emva 2 iminyaka. Ukuba usengozini yokuphulukana nethambeka, wenza intlawulo ezenzekelayo ngaphakathi Useto lweGoDaddy, oku kuyakuhlawulisa ngokuzenzekelayo xa indawo yakho iphela.
Ukuthenga iDomain ngePhakheji
Ukuba ungumsebenzisi omtsha ukuthenga igama lesizinda, Ndincoma ukuba uqwalasele ukuthenga igama lesizinda samahhala elibandakanyiweyo kwiphakheji yokubamba. Oku kukukhusela ekubeni uhlawule ngaphezulu. Akukho mathandabuzo, xa uye kuthenga okokuqala ngqa, Unokuziva uhlawula ngaphezulu kwentlawulo. Kungenxa yoko le nto? Ndabelana ngamava am kwaye ndicebisa ukuba uqaphele malunga nokukhetha.
Umzekelo–xa usiya ukuthenga ngeBluehost Inkampani enegama elifanayo kwiGoDaddy. Abayi kukusebenzela kuphela igama lesizinda sasimahla kodwa kunye nesatifikethi se-SSL esinezinto ezininzi ngexabiso elifanayo olifumana kwiGoDaddy. Njengokuba usazi, Enye yeempawu– Isatifikethi se-SSL kule mihla sibalulekile. Kuqwalaselwa njengobungakanani benqanaba. Jonga umfanekiso-skrini olandelayo.
Ukongeza koku, Kuya kufuneka uqiniseke ukuba igama lethambeka kufuneka libe ngu- .com ekujoliseni kwilizwe liphela kwaye inokuba yindawo ethile kwilizwe elithile ngokungathi ujolise eIndiya kuya kufuneka uthathe .in, yeAustralia kuya kufuneka uyithenge .com.au, ngokufanayo ne-UK kulungile ukuthenga i-co.uk kwizinga lokuqala.
Nantsi enye into elungileyo kuwe, ukuba ukufuphi usuku lokubhiyozela njengeKrisimesi, ULWESIHLANU omnyama. Oku kukunceda ngakumbi. Ixabiso lesizinda lahlukile ngamaxesha ahlukeneyo onyaka. Umzekelo– Ngosuku lwangoLwesihlanu omnyama, ungathatha ngokulula inzuzo ukuya kuthi ga 70% icimile. Ngelixa iintsuku eziqhelekileyo, bakubiza amaxabiso ahlukeneyo.
Ngaphandle koku, Abasebenzisi abaninzi okanye ii-newbies zifumana amaxabiso eGoDaddy amaxabiso aphezulu ngokuthelekisa. Ngelixa ezinye iinkampani zokubamba zibonelela ngeempawu ezininzi ngexabiso elifanayo. Abanye bakhetha ukuthenga i-domain kwi-GoDaddy kunye nenkonzo yokubamba kwenye.
Isiphelo Thenga i-Domain kwiGoDaddy kwaye uyiphathe: Ayisiyiyo kuphela imimandla evela ku-Godaddy kodwa nabanye ababoneleli beenkonzo ezifanayo abake bakubonelele ngokusisigxina kubume obuninzi. Kodwa ungabhalisa ixesha elide ukuya kuthi ga kwi 10 iminyaka. Emveni kwalonto, kufuneka uyihlaziye. Iibhlogi okanye abanini bewebhusayithi bakholisa ukukhusela kwirejista yobhaliso ixesha elide. Oku kubiza kakhulu. Ngexesha elinye, zihlaziya ubuninzi be 5 iminyaka.
Previous PostNgaba kuya kufuneka ndithenge i-SSL kumamkeli wam?
Next PostUyakha njani iwebhusayithi emva kokuthenga igama ledomeyini?
Ngaba unokwenza iWebhusayithi ngaphandle kokuthenga iDomain?